၈ လအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပြန်ပို့ရသည့် မြန်မာမွတ်စလင် ၁ သောင်းကျော်ရှိဟုဆို | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ငြိမ်းချမ်း| February 18, 2013
This entry was posted on February 18, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၂) “မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၂)”
ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများကြား ဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေး →